FIREFOX မှာပုံရိပ်တွေကို DISABLE လုပ်နည်း - MOZILLA FIREFOX - 2019
Mozilla က Firefox မှာပုံရိပ်တွေကို disable လုပ်နည်း
စမတ်ဖုန်းများ၏လျင်မြန်စွာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စျေးနှုန်း / စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းအရာအောက်၌ရှိသမျှသောထုတ်ကုန်ဟင်းချိုအလုပ်က Android အပေါ်အခြေခံပြီး FlymeOS စီးပွားဖြစ်စနစ်, operating devices များ၏ရှေ့မှောက်တွင်သာမဟုတ်ဘဲဆက်နွယ်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Meizu ၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များ။ စမတ်ဖုန်း M2 မှတ်ချက် - ထို updated ပြန်လည်သတ်မှတ်မှုနှင့်ဤ OS ကိုလုပ်ဖို့ထုံးစံ firmware ကိုနဲ့အစားထိုးသည့် Meizu ၏လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ်များတစ်ခုဖြစ်သည်ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်လည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, က devices များပေါ်တွင် firmware ကို update လုပ်ပေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဝင်္ကတခြားအမှတ်တံဆိပ်ကနေ Android အတွက်အခြေစိုက် devices များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးနဲ့ရိုးရိုးတဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျက်စီး၏အချို့အန္တရာယ်မှသာ Third-party developer များအနေဖြင့်ပြုပြင်ထားသောဖြေရှင်းချက်၏ installation ကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအချက်များကိုအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မသငျ့သညျ။
စမတ်ဖုန်းများ၏ပိုင်ရှင်လွတ်လပ်စွာ device ကိုရှိသူများသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကိုင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်လည်းရလဒျမြားနှငျ့အကြိုးဆကျအဘို့တာဝန်ဖြင့်သမုတ်သော! Lumpics.ru အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရေးသားသူအသုံးပြုသူလုပ်ရပ်များမဆိုအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များများအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည်!
အဆိုပါဝင်္ M2 မှတ်စုများအတွက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစက်နှင့် install လုပ်ထားပါလိမ့်မည်သောစနစ်၏ဗားရှင်းသောကိရိယာနှင့်အတူကိုင်တွယ်၏အန္တိမရည်မှန်းချက်အပေါ်အဘယ်အရာကို firmware ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထွက်ရှာတွေ့မှဖြန့်ချိလိမ့်မည်သည့်အခါယခုအချိန်တွင်အထိပါပဲ။
ယခုအချိန်တွင်မှာ Maisie M2 ချိုဘို့ firmware ကိုရှိပါတယ်:
, G (ဂလိုဘယ်) - နိုင်ငံတကာစျေးကွက်အပေါ်ရောင်းရန်လတ်စမတ်ဖုန်းအတွက်ထုတ်လုပ်သူများက installed ကြောင်း Software များ။ သင့်လျော်သောတည်နေရာများအပြင်၌, firmware ကိုတရုတ်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အများအားဖြင့်မလိုအပ်သောန်ဆောင်မှုအတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပါဘူး, စသည် Google software ကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Software များအညွှန်းကိန်း, G, ရုရှစကားပြောဒေသ၏အသုံးပြုသူများအများအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်။
ငါ (နိုင်ငံတကာ) - ခေတ်မမီတော့ခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်အသုံးမပြုတဲ့ယနေ့ Flyme OS ကို4၏အခြေခံပေါ်မှာခွဲခြားဖို့အသုံးပြုအဟောင်းသတ်မှတ်ရေးကို Global firmware ကို။
တစ်ဦးက (Universal) - နိုင်ငံတကာနှင့်တရုတ်စျေးကွက်အတွက်ရည်ရွယ် M2 မှတ်ချက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်တစ်လောကလုံးအမျိုးအစား system ကိုဆော့ဖ်ဝဲ, ။ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်ပြီး, ရုရှမူပြောင်းခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်, တရုတ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် applications များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမရနိုင်ပါ။
ဦး (Unicom), ကို C (တရုတ်မိုဘိုင်း) - အသက်ရှင် Meizu စမတ်ဖုန်းများတရုတ်ကျွန်းအပိုင်း (ဦး) အပေါ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏ကျန် (C) ထဲမှာကိုအသုံးပြုဖို့သူအအသုံးပြုသူများအတွက်စနစ်များအမျိုးအစားများ။ ရုရှားဘာသာစကားမရရှိနိုင်အဖြစ်န်ဆောင်မှု / applications များ Google ကတရုတ်စနစ်ကန်ဆောင်မှုနှင့် application တှေအမြားကွီးပါပဲ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းစက်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ဟာ operating system ၏အမျိုးအစားနှင့် version ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
ကြည့်ရန် FlymeOS settings ကို။
အောက်ခြေမှာရွေးချယ်မှုစာရင်းထဲမှတဆင့် scrolling, ပစ္စည်းရှာဖွေဖွင့်လှစ် "အကွောငျးကိုဖုန်း" ( "ဖုန်းအကြောင်း") ။
firmware ကိုအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် "Build number ကို" ( "နံပါတ် Build") ။
အများဆုံးပိုင်ရှင်တွေ Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက်တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို Global-FlaymOS ဗားရှင်းဖြစ်တယ်, ဒါစနစ်ဆော့ဝဲ၏ဤအမျိုးအစားနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရုတ်များအတွက် software ကိုဗားရှင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ, ပြင်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖော်ပြချက်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသော။ ဤရွေ့ကားထိန်းသိမ်းရေး device အတွက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲအမှန်တကယ်တပ်ဆင်မတိုင်မီထွက်သယ်ဆောင်နေကြတယ်, နောက်ပိုင်းတွင်ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
အဘယ်မှာရှိ firmware ကိုရဖို့
ထုတ်လုပ်သူ Meizu firmware ကို download လုပ်တာဝန်ရှိသူတဦးကအရင်းအမြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ M2 အဘို့အ packages များ FlymeOS ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရရှိရန်အောက်ပါလင့်ခ်ကိုသုံးနိုင်သည်မှတ်ချက်:
Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက်တရားဝင်တရုတ် firmware ကို Download လုပ်ပါ
တရားဝင် site မှ Meizu M2 မှတ်ချက်ဘို့ကို Global-firmware ကို Download လုပ်ပါ
အောက်ကဥပမာမှာအသုံးပြုအားလုံး packages များနှင့်ကိရိယာများ, ပစ္စည်းများ၏သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သောလင့်များအပေါ် download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သငျ့လျြောသောပြင်ဆင်မှုအဖြစ်အပျက်၏နီးပါးမဆိုမျိုး၏အောင်မြင်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်, ဒီမှာဆော့ဖ်ဝဲ Meizu M2 မှတ်ချက်ကို install ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုချင်သောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ဆောင်။
ကွန်ပျူတာဖို့ interface ကိုဝင်္ M2 မှတ်စုများကြောင့်ဖုန်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဤကိစ္စကိုနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှနှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး။ devaysa နဲ့ PC drivers တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်မူလ firmware ကိုအတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်မကြာခဏအလိုအလျှောက် install လုပ်ထားကြပါတယ်။
လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်, installer ကိုပါဝင်သောက virtual CD-disk ကို drive ကို devaysa Built-in memory ကိုအသုံးပြုပါ။
ဖုန်းပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်း၏ installation စဉ်အတွင်းအပေါ် switched ရမည်ဖြစ်သည် "Debugging YUSB"။ ဒီ option ကိုသုံးစွဲဖို့, သင်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုသွားသင့်ပါတယ်: "Settings" ကို ( "Settings" ကို) - "Accessibility" ( "အထူးအင်္ဂါရပ်များ" ။ ) - "ရေးသားသူအတွက်ရွေးချယ်စရာများ" ( "Developers") ။
switch သည်ရွှေ့ "ကို USB ဒီဘာဂင်" ( "Debugging YUSB") မှ "Enabled" နှင့်ပြတင်းပေါက်မေးမြန်းမှု, နှိပ်ခြင်းဖြင့် function ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်အတွက်အပြုသဘောဆောင်အတွက်အဖြေကို "အိုကေ".
သင်ကားမောင်းသူ installer ကိုမစတင်မီ Windows 8 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပြေးသောကွန်ပျူတာ manipulate တစ်လက်ကိုင်ကိရိယာကိုသုံးလိုလျှင်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်စိစစ်အတည်ပြု system component များကို disable ရမည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်: ယာဉ်မောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်စစ်ဆေးနေ disable
တစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးကို PC ချိတ်ဆက်ခြင်း M2 မှတ်ချက်ချ visor ရွှေ့နှင့်သင်အသုံးပြုသောခံရဖို့ကို USB ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြု, ထိုအကြောင်းကြားစာကို item ဖွင့်လှစ်။ ထို့နောက်ရွေးချယ်စရာများ၏စာရင်းထဲတွင်လာမယ့်ပစ္စည်းရန်အကွက်ကိုသတ်မှတ် "Build-in ကို CD-ROM ကို" ( "Built-in CD-ROM ကို") ။
ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် "ဒီကွန်ပျူတာ" ကို virtual disk နဲ့ဖေဖေကိုရှာဖွေ "ကို USB Drivers"လက်စွဲတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သော။
ADB ကယာဉ်မောင်း (ဖိုင် Install android_winusb.inf)
နှင့် broaching mode ကို MTK (CDC-acm.inf).
သင် drivers တွေကို install လုပ်သည့်အခါကိုယ်တိုင် link ကိုပစ္စည်းများ၏ညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းရပါမည်:
သင်ခန်းစာကို: Android အတွက် Firmware များအတွက်ယာဉ်မောင်း Installing
အဆိုပါ M2 မှတ်စုများကို Android အတွက် boot, နှင့် built-in SD ကမဖြစ်နိုင်ပါမသုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကအမှု၌, အဆုံးစွန်သောရဲ့ contents အောက်ပါလင့်ခ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရနိုင်သည်
ကွန်နက်ရှင်နဲ့ firmware ကို Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
အဆိုပါ Meizu device ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်, အမှတ်တံဆိပ် shell ကို Flyme အောက်မှာလည်ပတ်, သင်အဘို့ပြင်ဆင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သောသူတို့အပါအဝင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုး, ရန်အ developer smartfona.Dlya လက်လှမ်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး applications များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဂေဟစနစ်အပေါငျးတို့သအားသာချက်များကို အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ firmware ကို, Flaim အကောင့်လိုအပ်ပါသည်။
ဖုန်းထဲတွင်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် entry ကိုမှတ်ချက်ကိုအလွန်လမ်းကြောင်းအခွင့်အရေး၏ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် user data ကို backup တခုကိုရိုးရှင်းစွာ။ ဤသည်ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကအကောင့် Flyme တစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်ရှင် device ကိုလိုအပ်သည်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, FlymeOS ၏တရုတ်ဗားရှင်း၌ဤခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း, တကစမတ်ဖုန်းကနေတိုက်ရိုက်ဖြစ်နိုင်အကောင့်တစ်ခု Register ပေမယ့်။ ထို့ကြောင့်အများဆုံးမှန်ကန်သင့်ရဲ့ PC နဲ့အကောင့်တစ်ခုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်။
အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သစ်တစ်ခု account တစ်ခု register မှစာမျက်နှာကိုဖွင့်:
တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် Meizu အပေါ်အကောင့်တစ်ခု Flyme-မှတ်ပုံတင်ရန်
drop-down list ကနေတိုင်းပြည်ကုဒ်အားဖြင့် entry ကိုလယ်ပြင်၌ရှိသောတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ဂဏန်းဝင်။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "pass ဖို့ကိုနှိပ်ပါ" ပြီးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်, လုပ်ဆောင် "သင်စက်ရုပ်မရှိကြပေ။ " ဒီ button ကိုတက်ကြွစွာဖြစ်လာပြီးနောက် "ယခုမှတ်ပုံတင်မည်"ဒါကြောင့် Push ။
ကျနော်တို့ SMS ကိုအတည်ပြုရန်ကုဒ်နှင့်အတူစောင့်ဆိုင်း
အရာအပြီးသတင်းစာကိုနောက်ခြေလှမ်း၏စာမျက်နှာမှတ်ပုံတင်အတွက်သင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌မိတ်ဆက်ပေးရာ "NEXT ကို".
သငျသညျထိုလယ်၌ထလာနှင့်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်လာမည့်ခြေလှမ်းအတွက် "Password ကို" အကောင့်များအတွက် password ကို, ကိုနှိပ်ပါ "Submit".
သငျသညျ, (1) အဓိပ္ပာယ်ပြည့်အမည်ပြောင်နှင့်ကိုယ်ပွားသတ်မှတ် (2) စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်, access ကို (4) restore လုပ်ဖို့အီးမေးလ်လိပ်စာ (3) နှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာပွင့်လင်းပရိုဖိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစာမျက်နှာ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်မှာရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရာ, အကောင့် (Account Name ကို) ၏နာမကိုအမှီမေးဖို့:
link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Flyme Account Name ကို Set".
လိုချင်သောအမည်နှင့်စာနယ်ဇင်း Enter "Save".
ခြယ်လှယ်၏ရလဒ်အဖြစ်ကျနော်တို့အကောင့် Flyme အမျိုးအစားကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦးရဲ့ login ရ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ имя_пользователя@flyme.cnသောဂေဟစနစ် Meizu အတွက် username နှင့်အီးမေးလ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
device ကို setting များကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်များ၏အချက်ကိုသွားအသုံးပြုဖွယ် "Flyme အကောင့်" ( "အကောင့် Flyme") အပိုင်း "အကောင့်" ( "Account") ။ ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဝင်မည် / မှတ်ပုံတင်မည်" ( "ဝင်မည် / မှတ်ပုံတင်မည်"), ထို့နောက်မှတ်ပုံတင်အပေါ်သို့ပေးသောအကောင့်အမည် (အထက်လယ်ပြင်) နှင့် password ကို (အနိမ့်သောလယ်), ရိုက်ထည့်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများ "၌ Log" ( "ထည့်သွင်းမှု") ။
မည်သည့် devaysa မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သည့်အခါအခြေအနေကိုဘယ်မှာ user data ကို (စသည်တို့ကိုအဆက်အသွယ်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, installed applications များ) အပါအဝင်ယင်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါရှိသောဒေတာအားလုံးဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးစံသမားရိုးကျကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သူတို့ကိုသင် back up လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ backup လုပ်ထားအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကိုနှင့်စပ်လျဉ်း Meyzieu M2 မှတ်စုများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဆောင်းပါးကနေ Android device ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ရှေ့တော်၌ထိုသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းဖို့နည်းလမ်းတဦးတည်းကိုသုံးနိုင်သည်:
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထုတ်လုပ်သူ Third-party tools တွေကိုမသုံးဘဲအရေးကြီးသော user data ကိုဝင်္စမတ်ဖုန်း back up လုပ်ထားဖို့ကောင်းတစ်ဦး tool ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Flaim-အကောင့်များ၏စွမ်းရည်များအသုံးပြုခြင်းစနစ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, installed applications များ, အဆက်အသွယ်မက်ဆေ့ခ်ျများ, သမိုင်းကိုပဌနာ, ပြက္ခဒိန်သတင်းအချက်အလက်, ဓါတ်ပုံအပါအဝင်, သူတို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏နီးပါးအပေါင်းတို့၏တစ်ဦးမိတ္တူကယ်ဖို့အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သည်။
သွားပါ "Settings" ကို ( "Settings များ") ဖုန်းကို select "အကြောင်းဖုန်း" ( "ဖုန်းအကြောင်း"), ထို့နောက် "သိုလှောင်" ( "မှတ်ဉာဏ်") ။
အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "Backup ကိုနှင့် Restore" ( "Backup ကို"), သတင်းစာ "Allow" ( "ပါမစ်") ပြတင်းပေါက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံပါ, အဲဒီနောက်ကိုနှိပ်ပါ "ယခုအရန်ကူး" ( "backup တစ်ခု Make") ။
သငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် backup တစ်ခုကယ်တင်နှင့်စတင်ချင်ဒေတာအမျိုးအစားများများ၏အမည်များအနီးရှိအမှတ် Set "အရန်ကူးယူခြင်း START" ( "ကူးယူ Start") ။ အဆုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်စာနယ်ဇင်းကယ်တင်သည်အထိကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်း "ပြီးပါပြီ" ( "READY က") ။
ကို default ၏တစ်ဦးက backup လုပ်ထားမိတ္တူမှတ်ဉာဏ် devaysa အမြစ် directory ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည် "Backup ကို".
အချို့သောလုပ်ငန်းများနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာဖယ်ရှား backup လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြည့်စုံမှတ်ဉာဏ် format ကိုမလိုအပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလုံခြုံသောအရပ် (PC များ disk ကို, Cloud ဝန်ဆောင်မှု) အတွက် backup လုပ်ထားအတူဖိုလ်ဒါကိုကော်ပီကူးဖို့အလွန်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ပို။ မိုဃ်းတိမ်ကို Meizu နှင့်အတူထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဒေသခံ backup လုပ်ထားဖန်တီးအပြင်, ဝင်္ရိုးရှင်းစွာ Flaim အကောင့်ထဲမှာ logging အသုံးပြုပုံသတင်းအချက်အလက်များ restore လုပ်ဖို့, သင်တို့ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအဓိက user data ကိုတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြု၏။ စဉ်ဆက်မပြတ်အလိုအလျောက်ထပ်တူထွက်သယ်ဆောင်ရန်အောက်ပါလုပ်ပါ။
ကျနော်တို့လမ်းပေါ်နေသောခေါင်းစဉ်: "Settings" ကို ( "Settings" ကို) - "Flyme အကောင့်" ( "အကောင့် Flyme") - "ဒေတာများကို Sync ကို" ( "မှာ Data synchronization") ။
မိုဃ်းတိမ်မှလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကူးယူဒေတာဖို့, switch ကိုရွှေ့ "အော်တို Sync ကို" အနေအထား "Enabled"။ အဆိုပါဒေတာထို့နောက်ကြိုတင်မှာကြားထားလိုအပ်သောကြောင်းသတိပြုပါနှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်နေသည် "SYNC NOW က".
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးအပေါ်သို့, သင် device ကိုတွင်ပါရှိသောစေခြင်းငှါလုနီးပါးအားလုံးအရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှုအတွက်ယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို Meizu M2 မှတ်ချက်တစ်ခုအလေးအနက်ကိုင်တွယ်စေရန်, SuperUser အခွင့်ထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ယင်းအစီရင်ခံယူနစ်, မှတ်ပုံတင်အကောင့် Flyme ပိုင်ရှင်များအဘို့, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုခုကိုအခက်အခဲများကိုအောက်ပါအရာရှိတဦးကနည်းလမ်းလုပ်မထားဘူး။
ဖုန်းကိုသငျသညျ Flyme-အကောင့် log in ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါဖွင့်လှစ် "Settings" ကို ( "Options ကို"), အကို select လုပ်ပါ "လုံခြုံရေး" ( "လုံခြုံရေး") အပိုင်း "စနစ်" ထို့နောက် ( "ယန္တရား"), သတင်းစာ "Root ခွင့်ပြုချက်" ( "Root-access ကို") ။
အဆိုပါစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသား Set "လက်ခံပါသည်" လမ်းကြောင်း-အခွင့်အရေးနှင့်စာနယ်ဇင်းအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုစာသားသတိပေးအောက်မှာ ( "Accept") "အိုကေ".
အဆိုပါအကောင့်များ၏ password နဲ့ Flaim-Enter နှိပ်ပါ "အိုကေ"။ အဆိုပါစမတ်ဖုန်းကိုအလိုအလျောက် Reboot လုပ်သွားပါလိမ့်မည်နှင့်အမြစ်အခွင့်ထူးနှင့်အတူပြီးသားစတင်ပါလိမ့်မည်။
ပို။ ထိုကိစ္စတွင်လျှင် Flyme-အကောင့်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းအခွင့်အရေးရယူ၏နည်းလမ်းကိုသင် app ကို KingRoot ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပစ္စည်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အမြစ်အခွင့်ထူးရယူနိုင်ရန်အတွက်ကောက်ယူတဲ့အစီအစဉ်ကိုတဆင့်ကိုင်တွယ်:
သင်ခန်းစာကို: KingROOT ကို PC မှတဆင့်ရုသသည်အခွင့်အရေးများကိုရယူလိုက်ပါ
အစားထိုး ID ကို
ကမ္တာ့ firmware ကိုတရုတ်အတွက်အသုံးပြုရန် software ကိုဗားရှင်းကနေအကူးအပြောင်းအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲ ID ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည်ဘာသာစကားရုရှပါဝင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်တစ်ဦး "ဥရောပ" ဟုအဆိုပါကိရိယာကို Google ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအကြိုးခံစားခှငျ့အသွင်ပြောင်းလမ်းညွှန်, "တရုတ်" Meizu M2 မှတ်ချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကအောက်ပါ။
ကျနော်တို့ device ကိုအမြစ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲမှာ Application "Android အတွက် Terminal နှင့် emulator" Install:
ဒီ tool ကို Google Play တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Play စစျေးကွက်အတွက် Meizu M2 မှတ်ချက် ID ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် Terminal နှင့် Download
Play Store ရှိ, အရှင်က Google ဝန်ဆောင်မှုများ, နှင့်မျှမစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လျှင်, internal memory ထဲမှာရရှိလာတဲ့အောက်ပါလင့်ခ်နှင့်မိတ္တူအပေါ် Terminal_1.0.70.apk ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
အဆိုပါ Meizu M2 ID ကိုမှတ်ချက်ပြောင်းလဲပစ်ရန် Terminal နှင့် Download
ဖိုင်မန်နေဂျာအတွက် APK ဖိုင် running app ကို install လုပ်ပါ။
အဆိုပါ Meizu M2 မှတ်ချက် ID ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ထုံးစံဇာတ်ညွှန်း်ဖိုင်တွေကို Download လုပ်ပါ။
အဆိုပါ Meizu M2 ID ကိုမှတ်ချက်ပြောင်းလဲ script ကို Download လုပ်ပါ
အထုပ်ဖြည်ခြင်းနှင့် script ကိုဖိုင်ကိုနေရာ chid.sh စမတ်ဖုန်းများ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏အမြစ်။
ပွေးသှား "Terminal နှင့် emulator"။ အဖွဲ့ရေးသားခြင်းsuနှင့်စာနယ်ဇင်း "ကိုထည့်သွင်းခြင်း" လက်ကွက်ပေါ်မှာ။
Button လေး - လမ်းကြောင်း-တရား app ကိုလုပ်ခွင့်ပြု "Allow" အဆိုပါမေးမြန်းချက်ကိုပြတင်းပေါက်နှင့် "ဆဲ Allow" box ကို-သတိပေးပါတယ်။
အထက်ပါ command ကို၏ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုသင်္ကေတဖြစ်သင့်$အပေါ်#တစ်လိုင်း input ကို terminal ကိုပညတ်တော်တို့ကို။ အဖွဲ့ရေးသားခြင်း/sdcard/chid.sh shနှင့်စာနယ်ဇင်း "ကိုထည့်သွင်းခြင်း"။ ထိုအခါစက်ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်အသစ်တစ်ခုအမှတ်အသားနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။
အရာအားလုံးကောင်းစွာသှားသောသေချာစေရန်, သငျသညျတဖနျအထကျနှစျခုခြေလှမ်းများလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါအမှတ်အသား OS ကို, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်း installation ကိုသင့်လျော်သည်လျှင်, terminal ကိုတစ်ဦးသတိပေးချက်ထွက်ကိုငါပေးမည်။
ဒီနေရာမှာ install upgrade နှင့် Meizu M2 မှတ်ချက်အတွက်တရားဝင် FlymeOS တစ်ခုအစောပိုင်းကဗားရှင်းပယ်ဖျက်ရန်နှင့်လည်းပြုပြင်ထားသော (ထုံးစံ) ဖြေရှင်းနည်းများကို install ဘို့ညွှန်ကြားချက်ပေးပါသည်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းရေးဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီအဆုံးသတ်အပေါင်းတို့နှင့်လိုအပ်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စတင်ထံမှညွှန်ကြားချက်များ၏ရွေးချယ်သောနည်းလမ်းကိုစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်။
Method ကို 1: စက်ရုံ rekaveri
စနစ်ကို install အဘို့ဤအရာရှိတဦးကနည်းလမ်းအများဆုံး application ကို၏ဘေးကင်းမှု၏ရှုထောငျ့မှပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒီနည်းလမ်းမှာက FlymeOS ကို update များနှင့်နောက်ကျောအစောပိုင်းကဗားရှင်းလှိမ့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စက်ကို Android သို့တင်ဆောင်မဟုတ်အခါထို့ပြင်နည်းလမ်းတခုထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါဥပမာ FlymeOS 5.1.6.0A နှင့်ကြိုတင်ပြုပြင်ထားသောအမှတ်အသားနှင့်အတူစက်၏ FlymeOS 5.1.6.0G ဗားရှင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
စနစ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့အထုပ်ကို load ။ လင့်ခ်များက download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါစံနမူနာဖိုင်များတွင်အသုံးပြုအဖြစ်:
Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက် firmware ကို FlymeOS 5.1.6.0G Download
ဖိုင်များကူးယူ, အမည်ပြောင်းမဟုတ် update.zip အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကိရိယာ၏အမြစ်။
rekaveri အတွက် loaded ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, Meiz M2 မှတ်စုများကိုချွတ် volume ကိုတက်ခလုတ်ကို stifle ကကိုင်ထားစဉ်အခါ, ပါဝါ key ကိုနှိပ်ပါ။ တုန်ခါမှုအပြီး "ဖွင့်ပေးခြင်း" လည်ကြကုန်အံ့, နှင့် "Volume ကို +" အောက်ကပုံလိုမျိုးမျက်နှာပြင်သည်အထိကိုင်ထားပါ။
အဆိုပါ update ကိုအထုပ် devaysa rekaveri မဝင်ခင်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်မှကူးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေသောဖြစ်ရပ်၌, သငျသညျပြန်လည်နာလန်ထူ mode မှာမူသောသင်တို့စမတ်ဖုန်း, ကွန်ပျူတာကို USB-cable ကိုချိတ်ဆက်နှင့်စက်ပစ္စည်း၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဖိုင်စနစ်၏အပြောင်းအရွှေ့ကို Android အတွက် loaded မဟုတ်ပါထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဂျခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းကွန်နက်ရှင်ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ drive ကိုအဖြစ်ဆုံးဖြတ် «ပြန်လည်ထူထောင်ရေး» 1.5 GB ကို၏စွမ်းရည်များနှင့်သင်အထုပ်ကူးယူလိုသည့်အတွက် « Update.zip »
ပွိုင့်များတွင်အမှတ်အသား Set "Clear ကိုဒေတာ"အဲဒီဒေတာသန့်ရှင်းရေးဆိုလို။
အဆင့်မြှင့်၏အမှု၌၎င်း, ပြီးသား installed သောအမျိုးအစားတူ၏ firmware ကိုအတူအထုပ်ကို install လုပ်ဖို့ကိုသုံးသန့်ရှင်းရေးချန်လှပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီစစ်ဆင်ရေး၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
ခလုတ်ကိုတွန်း "Start"။ ဒီအထုပ်ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်သည်, ပြီးတော့တပ်ဆင်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းသည် smart ဖုန်းကိုအလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်စနစ် reboot တံ့သောပြီးစီးပေါ်၌ဗားရှင်းအသစ် Flaim, ပြီးပြည့်စုံသည်အထိစောင့်ပါ။ ကျနော်တို့ရုံ installed components များ၏ကနဦးအဘို့အစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဒေတာသန့်စင်ထွက်သယ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာကနဦး setup ကို shell ကိုဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နေဆဲ,
နှင့် firmware ကိုပြီးပြည့်စုံသည်။
Method ကို 2: Integrated updates များကိုနည်းလမ်း install
အဆိုပါ Meizu M2 မှတ်ချက်အတွက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်ပါ၏ဤနည်းလမ်းကိုအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကဗားရှင်း FlymeOS အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကိုစမတ်ဖုန်းမှ update လုပ်ဖို့အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
မဟုတ်ရင်အဆင့်မြှင့် installation ကိုစတင်ခင်မှာအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောဘဲနေလျှင်, နည်းလမ်းစတိုးဆိုင်များအဆိုပါစမတ်ဖုန်းကိုတွင်ပါရှိသော data အားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်း။ တာဝန်ရှိသူတဦးက firmware ကိုဗားရှင်း FlymeOS 6.1.0.0G ထိပ်တန်း 5.1.6.0G ကို install အောက်ကပစ္စုပ္ပန်ဥပမာမှာပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း installed ။
ဆော့ဖ်ဝဲ၏ updated version ကိုအတူအထုပ်ကို Download လုပ်ပါ။
Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက် firmware ကို FlymeOS 6.1.0.0G Download
ဖြည်ခြင်းမရှိဘဲ, ဖိုင်ကိုနေရာ update.zip အဆိုပါဖုန်းရဲ့ internal memory ကို။
ဖိုင်မန်နေဂျာစမတ်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးအစောပိုင်းကသင်ကူးယူဖိုင်ကိုတွေ့ပါ update.zip။ Затем просто нажимаем на наименование пакета. Система автоматически определит, что ей предлагается обновление, и продемонстрирует подтверждающее возможность установки пакета окно.
Несмотря на необязательность процедуры, установим отметку в чекбоксе "Сделать сброс данных"။ Это позволит избежать проблем в будущем из-за наличия остаточных сведений и возможной "замусоренности" старой прошивки.
ခလုတ်ကိုတွန်း "Update ကိုအခုတော့", Meizu M2 မှတ်ချက်အတွက်ရလဒ်များ, အလိုအလြောကျပြန်လည်စတင်ရန်စစ်ဆေး, ပြီးတော့အထုပ်ကို install ပါလိမ့်မယ် update.zip.
FlymeOS6- သငျမွငျနိုငျသကဲ့သို့သင်တို့ Meizu စမတ်ဖုန်းများအတွက်စနစ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုရနိုင်ဒါကြောင့်တကယ်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးစာသား 10 မိနစ်များတွင်ပါ!
Method ကို 3: ထုံးစံ firmware ကို
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဝင်္ M2 မှတ်စုများ 7.1 Nougat အပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်းအန်းဒရွိုက်၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းကိုအခြေခံပြီးတစ်ဦးအလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်ဆော့ဝဲဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ပိုင်ရှင်တွေဖန်တီး devaysa မှ Third-party developer များခွင့်ပြုပါ။ ဤအဖြေရှင်းနည်းများအသုံးပြုခြင်း (ဒီမော်ဒယ်အရှိဆုံး "လတ်ဆတ်တဲ့" မသောကြောင့်ထိုသို့, ဒီမှာအားလုံးဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်) တရားဝင် update ကို FlymeOS shell ကိုလွှတ်ပေးရန်ပြုစုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ, သစ်ကို software ကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက် CyanogenMod, မျိုးရိုး, MIUI အဖွဲ့ကဲ့သို့သောလူသိများဖှံ့ဖွိုးတိုးတသင်းအဖြစ်သာမန်အသုံးပြုသူများနှင့်မြတ်နိူး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးပြုပြင်ထားသော operating system မြား၏ဗဟုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဖြေရှင်းချက်တူညီသောလမ်းကို install နှင့်၎င်းတို့၏တပ်ဆင်ဘို့လိုအပ်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များနေကြသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ!
အဆိုပါဝင်္ M2 မှတ်စုများပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ထုံးစံ firmware ကို rekaveri အတွက် install လုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမီ, Bootloader ကို devaysa သော့ဖွင့်ထားရပါမည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှေ့တော်၌ထိုစက်ကို6ရက်နေ့က installed နှင့် FlymeOS လမ်းကြောင်းယောက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းယူဆနေသည်။ မဖြစ်လျှင်, တဦးတည်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားစနစ်တပ်ဆင်၏နည်းလမ်းများ၏ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Bootloader ကို Meizu M2 မှတ်ချက်သော့ဖွင့်ဖို့ tool ကိုနီးပါးတစ်လောကလုံးလွယ်ပါတယ်ယူနစ်မယ်တော်ဆေးခန်း-SP FlashTool နှင့်အထူးကိုပြင်ဆင်ဖိုင်ပုံရိပ်တွေအစုတခုသက်ဆိုင်အဖြစ်။ အောက်ပါ link ကို download လုပ်ပါဖို့အားလုံးကိုလိုအပ်ကြောင်းမော်ကွန်းတိုက်:
Bootloader ကို Meizu M2 မှတ်ချက်သော့ဖွင့်ဖို့ SP FlashTool နဲ့ဖိုင်တွေ Download
ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းပစ္စည်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ SP FlashTool နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအကြံပြုသည်မဟုတ်လျှင်, လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတဆင့်ထုတ်လုပ်အခြေခံသဘောတရားများနှင့်ပစ်မှတ်ဖော်ပြသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: SP FlashTool မှတဆင့်မယ်တော်ဆေးခန်းအပေါ်အခြေခံပြီး Firmware ကို Android-device များ
အဆိုပါ disk ပေါ်မှာသီးခြားဖိုင်တွဲသို့ archive ကိုအထုပ်မှအထက်ပါလင့်ခ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် FlashTool Run ကို။
လျှောက်လွှာမှထည့်သွင်းခြင်း "DownloadAgent" သက်ဆိုင်ရာခလုတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် MTK_AllInOne_DA.bin အဆိုပါ Explorer ကိုပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
loading ကြဲဖြန့် - Button လေး "လွင့်စေ-တင်" နှင့်ဖိုင်ရွေးချယ်ခြင်း MT6753_Android_scatter.txt.
လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "တည်နေရာ" ပစ္စည်းဆန့်ကျင် "Secro" နှင့်ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သော Explorer ကိုပြတင်းပေါက်၌ကို select secro.imgလမ်းမှာတည်ရှိပြီး « SPFlashTool ပုံရိပ်တွေသော့ဖွင့်».
, လုံးဝသင့်ရဲ့ smartphone ကိုပိတ်ထားပါသင့်ရဲ့ PC မှာကနေ disconnect, သငျသညျကိုပလပ်ခံခဲ့ရလျှင်ခလုတ်ကိုနှိပ် "ဒေါင်းလုပ်".
အဆိုပါ M2 မှတ်စုများ YUSB ဆိပ်ကမ်းကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ပါ။ overwrite အပိုင်းကိုအလိုအလျောက်မစတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မပါလျှင်, ကိုယ်တိုင် directory ထဲတွင်တည်ရှိသောယာဉ်မောင်းကို install « MTK Phone မှာယာဉ်မောင်း» ဖိုလ်ဒါ « SPFLashTool ».
မှတ်တမ်းတင်အပိုင်းပြီးစီးတွင် "Secro"ပြတင်းပေါက်သည်ထင်ရှားအဘယျသို့ဆို "OK ကို Download လုပ်ပါ"ယင်းကို USB-port များအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းကိုပိတ်ထားပါ။ device ကိုများမပါဝင်ပါ!
ပြတင်းပေါက်ပိတ်ဖို့ "OK ကို Download လုပ်ပါ"ပြီးတော့ခြေလှမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း№5ကဤညွှန်ကြားချက်မှအလားတူသရုပ်ဆောင်, လယ်ပြင်ဖိုင်တွေကို add:
"ကြိုတင်ထား" - ဖိုင် preloader_meizu6753_65c_l1.bin;
"Lk" - ဖိုင် lk.bin.
ဖိုင်ရဲ့အဆုံးအားဖြင့်တစ်ကလစ် add "ဒေါင်းလုပ်" နှင့် YUSB ဆိပ်ကမ်း Meizu M2 မှတ်ချက်ချိတ်ဆက်ပါ။
ကျနော်တို့ပြန်ရေးရန် devaysa မှတ်ဉာဏ် partition ကို၏အဆုံးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းနှင့်ကို PC ကနေဖုန်းကိုပိတ်ထားပါ။
အဆိုပါရလဒ်တစ်ခုကို unlocked bootloader ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်, သင်စတင်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်ခြေလှမ်းပြောင်းရွှေ့ဖို့နိုငျသညျ, တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် rekaveri ၏ installation ပါဝငျသညျ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် rekaveri အဖြစ်ထုံးစံ firmware ကိုပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်မှတပါးအခြားသောရိုးရှင်း tool ကိုလည်းမရှိ။ အဆိုပါဝင်္ M2 မှတ်စုများတရားမဝင်ဆော့ဖ်ဝဲကို install သီးသန့် TeamWin အခွင့်အလမ်းများကို Recovery ကို (TWRP) ၏အသုံးပြုမှုကိုကတဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည်နာလန်ထူ setting ပြုပြင်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်သာအထက်တွင်တစ်ဦးကို unlocked bootloader ကိုနည်းလမ်းနှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်!
Bootloader ကိုနှင့် TWRP image ကိုကိုယ်နှိုက်သော့ဖွင့်ဖို့ archive ကိုအနေဖြင့်အထက်တွင် FlashTool သုံးပြီး install လုပ်ဖို့ကဒီမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရနိုင်သည်
Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက် TeamWin Recovery ကို (TWRP) Upload လုပ်ပါ
အဆိုပါ archive ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက် TWRP_m2note_3.0.2.zipတစ်ဦး image file ကိုမှလွှဲပြောင်းအလိုရှိသောကိရိယာနှင့်အတူတစ် folder ထဲမှာရရှိလာတဲ့တစ်ခုကိုဖွင့်နေသည်။
မှတ်ဉာဏ်ကိရိယာအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရတဲ့နိုင်စွမ်းစမတ်ဖုန်းဖိုင်မန်နေဂျာအပေါ်သတ်မှတ်မည်။ လက်တွေ့ကျကျစုံလင်သောဖြေရှင်းချက် - ES Explorer ကို File ။ ထို program ကို Google Play Store မှာနိုင်ပါတယ် Download:
ES Download ကို Google Play Store မှာ Explorer ကို File
ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီစတိုးဆိုင် Meizu ကို Android application များအတွက်:
ပွင့်လင်း ES Explorer ကို File များနှင့်အမြစ်အခွင့်ထူးနှင့်အတူ applications များပေးပါသည်။ ဒီအလုပျလြှောကျလှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်စရာ panel က switch ကိုတင်ထားရန် "Root-Explorer ကို" အနေအထား "Enabled"ထို့နောက်စုံစမ်းမှုပြတင်းပေါက်မန်နေဂျာရုသသည်အခွင့်အရေးများမှအခွင့်ထူးပေးအပ်၏မေးခွန်းကိုဟုတ်ကဲ့ဖြေပါ။
အဆိုပါ catalog ကိုသွားပါ «စနစ်» နဲ့ဖိုင်တွေဖျက်ပစ် ပြန်လည်နာလန်ထူ-ထံမှ-boot.p။ ဤအစိတ်အပိုင်း device ကို powering နေစဉ်စက်ရုံဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ partition ကို overwrite ဖို့ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် rekaveri ၏ installation နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုသညျခြေလှမ်းများ 2-4 သော့ဖွင့်ညွှန်ကြားချက် loader ကို Perform FlashTool ကို run, ထို့နောက် add "လွင့်စေ" နှင့် "DownloadAgent".
လယ်ပြင်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူတစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကလစ် "တည်နေရာ" မှတ် "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" တစ်ဦး Explorer ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်, သင် image ကိုရှေးခယျြသငျ့သော TWRP_m2note_3.0.2.imgဒီလက်စွဲ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ရရှိခဲ့သည်။
စာနယ်ဇင်းများ "ဒေါင်းလုပ်" နှင့် PC ကိုချွတ်ဝင်္ M2 ချိုချိတ်ဆက်ပါ။
ကျနော်တို့ image ကိုလွှဲပြောင်း၏အဆုံး (သည်အထိ window ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်စောင့်ဆိုင်း "OK ကို Download လုပ်ပါ") ထိုကိရိယာမှ YUSB cable ကိုပိတ်ထားပါ။
log TeamWinRecovery ဟာ့ဒ်ဝဲသော့ပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြု "Volume ကို +" နှင့် "ပါဝါ"စက်ပေါ်ရောက်သည်အဓိကမျက်နှာပြင်သည်တိုင်အောင်, ချွတ်ဖြစ်ပါသည်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်။
တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် firmware ကို install လုပ်ခြင်း
Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ rekaveri ကို install ဖျော်ဖြေ, အသုံးပြုသူမဆိုထုံးစံ firmware ကို install လုပ်ဖို့အင်္ဂါရပ်အားလုံးလက်ခံ၏။ အောက်ကဥပမာမှာ OS ကိုအထုပ်နှငျ့အသုံးပွု ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix အန်းဒရွိုက် 7.1 အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များနှင့် LineageOS AOSP အဖွဲ့များအပေါငျးတို့သအကောင်းဆုံးလွှမ်းခြုံကြောင့်တည်ငြိမ်ပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြေရှင်းချက်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း Remix နှင့်အတူဇစ်-အထုပ် load နှင့်စက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ် Meizu M2 မှတ်ချက်ထဲမှာ installed တစ် MicroSD card ကိုအပေါ်ထားလေ၏။
အန်းဒရွိုက်7အပေါ်အခြေခံပြီးပြုပြင်ထားသော firmware ကို Meizu M2 မှတ်ချက်များအတွက် Download
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းဟာ TWRP မှတဆင့်ပြုမိပါလိမ့်မည်။ လတ်အတွက်အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းအတွက် link ကိုဓာတ်ပုံများကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု:
Read more: TWRP မှတဆင့်က Android-powered စက်ကို flash လုပ်နည်း
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် loaded ထုံးစံစက်ဘီးမှဖိုင်ကိုကူးယူပြီးနောက်။ switch သည်ရွှေ့ "Swype ပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်ပြုပါရန်" လက်ျာဘက်။
အသီးအနှံကဏ္ဍများကိုဆေးကြောသန့်စင်ရန်သေချာစေပါ "DalvikCache", "ကက်ရှ်", "စနစ်", "ဒေတာများ" ခလုတ်ကိုဖြင့်သင့်ကိုခေါ်မီနူး, မှတဆင့် "အဆင့်မြင့် Wipe" ရှေးခယျြစရာစာရင်းထဲက "Wipe" ပတ်ဝန်းကျင်၏အဓိကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ။
ပုံစံပြီးနောက်ပြန်ပင်မမျက်နှာပြင်ကိုသွားနှင့် menu ကနေတဆင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အတူ rekaveri ကူးယူအစောပိုင်းကအထုပ်ကိုသတ်မှတ် "Install".